I-WWDC kulindeleke ukuba inyuse ixabiso lezabelo zeApple kunanini na ngaphambili | Ndisuka mac
I-WWDC kulindeleke ukuba inyuse ixabiso lezabelo zeApple kunanini na ngaphambili
Kuninzi okulindelweyo kwi-WWDC elandelayo ye-Apple ngoJuni 7. Oko kukuthi, kwiintsuku nje ezimbalwa. Yiloo nto abasebenzisi abayilindeleyo, iindaba ezimnandi kunye nenkqubela phambili enkulu esenza sizive ngathi sinezixhobo ezilungileyo kwimarike esezandleni zethu. Kodwa kulindeleke ukuba emva komsitho izabelo zenkampani yaseMelika nyusa ixabiso lakho eyenza inkampani ixabiseke nangakumbi kuqoqosho.
Inqaku eliphambili lika-Apple kwiWWDC inokuba ngumnxibelelanisi wesitokhwe seApple Ngaphezu kwembali ebonwe ngaphambili, ubukhulu becala ngenxa yokugxila kwi-Apple Silicon, njengoko kuchaziwe nguMorgan Stanley kwinqaku labatyali-mali kwaye kuqokelelwe liphephancwadi elikhethekileyo i-AppleInsider. LUMorgan Stanley Katy UHuberty ubhala ukuba iWWDC yangoMvulo olandelayo ayingomqhubi ophambili wokusebenza kwesitokhwe sikaApple. Nangona kunjalo, loo nto itshintshile kule minyaka idlulileyo.
Kule minyaka ili-10 idlulileyo, iApple iqhube kakubi i-S & P 500 ngamanqaku ayi-120 kunye namanqaku asisiseko ayi-110 kwiveki yokuqala nakwiveki yesibini emva komsitho weWWDC. Kwinyanga emva kwengcaciso ephambili yonjiniyela, yagqwesa kwi-S & P 500 ngamanqaku esiseko angama-70. Nangona kunjalo, kule minyaka mibini idlulileyo, ukusebenza kwesitokhwe sika-Apple emva kweWWDC kuye kwabhengezwa ngakumbi. I-Apple iphumelele I-S & P 500 kumanqaku esiseko se-440 kwiveki yokuqala emva komsitho kunye namanqaku esiseko se-600 kwinyanga elandelayo.
Ngelixa silindele ukuba uninzi lweesoftware / uhlaziyo lwenkqubo yokusebenza lube yindaleko ngakumbi kunonyaka ophelileyo, siyakholelwa ukuba iApple iya kugxininisa kwimizamo yokwandisa ukusetyenziswa kwe-Apple Silicon eyenzelwe ngaphakathi endlwini kwaye inokwazisa iMacBook entsha. Oko kwenza ukuba iWWDC yalo nyaka ibe yinto ebaluleke ngakumbi kuneminyaka edlulileyo. Eyona nto kugxilwe kuyo kumsitho, iya kuba yi-Apple Silicon.
Inkomfa ye-WWDC 21 iya kuphawula isikhumbuzo sonyaka omnye we-M1 chip kunye nomhlalutyi uHuberty ilindele ukuba iApple iqhubeke nomzuzwana kutshintsho kude neIntel.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-WWDC kulindeleke ukuba inyuse ixabiso lezabelo zeApple kunanini na ngaphambili
Uluhlu lwe-Apple Watch 7 lunokuba luncedo kakhulu ekulawuleni ukutya esikutyayo
Ungubani, uCharlie Brown? Iya kuqala kwi-25 kaJuni